Banky Iraisam-pirenena : Afa-po amin’ny ezaky ny governemanta malagasy -
AccueilRaharaham-pirenenaBanky Iraisam-pirenena : Afa-po amin’ny ezaky ny governemanta malagasy
Mazava. Tsy am-pihambahambana no nanambaran’ny solontenan’ny Banky Iraisam-pirenena, Coralie Gevers, tamin’ny fitsidihany ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka, omaly, fa afa-po amin’ny ezaky ny governemanta malagasy izy ireo. Indrindra, hoy izy, taorian’ny fivoriamben’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena (CBI) tany Paris, Frantsa, ny volana Desambra 2016. “Namatsy vola 1,3 miliara Dolara ho an’i Madagasikara mandritry ny dimy taona ny Banky Iraisam-pirenena. Amin’io vola mitentina 1,3 miliara Dolara io, efa namatsy vola 250 tapitrisa dolara ny Banky Iraisam-pirenena nanomboka ny volana desambra 2016 ho an’ny fandaharan’asa eo amin’ny tontolon’ny fambolena, ny fandaharan’asa eo amin’ny fanisana ny mponina, izay tafiditra amin’izany ny fanavaozana ny tetibola. Mbola hanohy izany eo amin’ny lafiny fampianarana sy ny sakafo izahay. Izany dia hoavy tsy ho ela akory”, hoy i Coralie Gevers, solontenan’ny Banky Iraisam-pirenena eto Madagasikara.
Noho izany indrindra, nanambara ity solontenan’ny Banky Iraisam-pirenena ity fa mandroso hatrany miaraka amin’ireo manam-pahefana ny Banky Iraisam-pirenena. “Mahafaly anay ny mahita ny fizotry ny fanavaozana sy ny fisandratana ara-toekarena eto Madagasikara. Tokony ho azo antoka miaraka amin’izany koa ny fitoniana politika, ary mila manatanteraka azy roa miaraka ny governemanta”, hoy hatrany i Coralie Gevers.
Nanambara kosa ny minisitra Henry Rabary-Njaka fa miasa amin’izay mahakasika mivantana ny vahoaka ny Banky Iraisam-pirenena. Izany, hoy izy, dia mifandraika amin’ny fandaharan’asan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, manao tohivakana ny fitsidihan’ireo masoivoho vahiny miasa sy monina teo amintsika ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka. Ankoatra ny solontenan’ny Banky Iraisam-pirenena, tonga niarahaba ny minisitry ny Rahaharaham-bahiny vaovao ny masoivohon’i Maorisy, Datakarram Goburdhun. Tamin’izany indrindra no nifandinihan’ny roa tonta mikasika fiaraha-miasan’i Maorisy sy Madagasikara. Teo ihany koa ny mahakasika indrindra ny fiaraha-miasa eo anivon’ny Kaomisionin’ny Oseana Indianina (COI), ny Frankôfônia ary ny varotra iombonana, eo amin’ireo Fanjakana, eo anivon’i Afrika amin’ny faritra Atsimo (Comesa).
Etsy andaniny, nitsidika ary nidinika tamin’ny minisitra Henry Rabary-Njaka ihany koa ny masoivohon’i Maraoka, Mohamed Benjilany, omaly teny amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, eny Anosy. Nifototra tamin’ny fanarahana ny fanatanterahana ny tetikasam-piaraha-miasan’ny firenena roa tonta tamin’ny fandalovan’ny Mpanjakan’i Maraoka, Mohammed VI, ny dinidinika tamin’izany. “Fanindroany amin’izao no nihaonako tamin’ny minisitra, ary niresahanay ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta”, hoy i Mohamed Benjilany, masoivohon’i Maraoka.